Amandla eMars kuMhlaza - Khetha Uphawu
Amandla eMars kuMhlaza
Nge Mars kwi Umhlaza , uninzi lwethu luya kuziva lusesichengeni ngenxa yobuthathaka bethu obuphenjelelwa ziimpembelelo zangaphandle kunye neentliziyo zethu ezimema ngaphezu kokuba sibonakala sikulungele ukujongana nokutshintsha ubomi bethu. Ubuthathaka bomphefumlo utyunyuzwa bubundlobongela obumsulwa kwaye sinokubona ubuthathaka bomntu kubo bonke ubunyulu babo, ukunqongophala kolwazi kunye nokunxibelelana nesilwanyana, umnqweno wethuku wokuphila usitsalela ngasemva kodwa usigcina siphila. Esi sikhundla kukuphazamiseka kweemvakalelo, indawo apho iimvakalelo zifumana khona okulungileyo kuthi kwaye zikhokele indlela nokuba oku kuchasene nentando yethu.
Kwihlabathi elinovelwano oluncinci, uthando kunye nokuba ngoogxa bethu kuneemfuno zethu zonke kuko konke ukunyaniseka, kufuneka sizibuze ukuba kutheni sizama ukugxotha iimvakalelo kunye nemiqondiso abayithumelayo njengoko sisiya ekuphumezeni injongo? Ngaba sitsibe inyathelo elinye okanye amabini, salibala ukubaluleka kwemeko yethu yengqondo, okanye ngaba ngokwenene sicinga ukuba iintliziyo zethu azibalulekanga? Ukuqwalasela ukuba Jupiter iphakamisa uphawu lweCancer, yintoni isigidimi sokwenyani sikaMars (isenzo sethu esingokwemvelo kunye nokuziphatha ngokwesondo) ukuba sichitha ukuhamba kweemvakalelo kunye nokuziphatha okunyanzelekileyo koMphefumlo wethu? Kukho isizathu sokuba yonke inyaniso ifunyenwe kulo mqondiso, njengoko yindawo apho uMphefumlo wethu uphumle khona, ukhuselekile, kwaye usondele ekuzoleni sonke esikufunayo. Yonke intsingiselo, ulwazi kunye nokunyaniseka kubonakala kubekwe embindini wentliziyo yethu, kwinqanaba le-15 leCancer, apho sisekuxolweni okucocekileyo kunye nothando kunye nabo bonke ookhokho bethu, silungele ukunika injongo kunye nobuhle kwinto nganye entsha engena. ubomi bethu.
I-Mars imele inyathelo lethu, amandla kunye nokuziphatha ngokwesondo, kwaye akucaci ncam ukuba kutheni uzuko lwakhe luya kuziva lubi kwindawo apho lonke ulwazi lufumaneka khona, kunye nokubizwa koMphefumlo wethu. Ngokwale mbono, kuyacaca ukuba ingxaki ekuphela kweMars efunyenwe kumqondiso weCancer ibekwe ngokungalunganga iinkolelo ezithintela ubundlongondlongo, ukusidanisa, nokubeka amandla ethu ukuba alale, okukhokelela ekuqhambukeni kobunyani kunye nenkululeko yomntu ngamanye amaxesha. ngeyona ndlela ingafanelekanga. Yiyo kanye loo nto iMars ngamanye amaxesha ifuna ukusenza sikhale, yaphule iintliziyo zethu kwaye isinqumle ukuze sophe, ukuze sicoce kwaye senze indawo yeenkolelo ezifanelekileyo zokuzinza.
Eli Joni likhusela ntoni?
Kuyaziwa ngokubanzi ukuba isikhundla esinjalo se-Mars sibonisa ukuthanda izwe kunye novelwano olugqithisileyo kuyo yonke imiba yekhaya kunye nelizwe. Kule meko inomdla, ikhusela ngokweemvakalelo, sinokucinga ukuba siyanceda, siziva ngathi akukho mntu wumbi usikhathaleleyo, kodwa sisalandela ubulungisa bokuziphatha okungekhona kwethu ukukuchaza. Ngezona njongo zilungileyo engqondweni, sinokophula imida emininzi kakhulu kunye nemiqobo yabanye kwaye sibakhusele kwizinto ezingezizezethu ukuzibamba. Oku kusithwalisa uxanduva olugqithisileyo, ngelixa sisusa isidima sabo sibakhuselayo, njengoko bekwazile ukuphila ubomi babo kunye nekamva labo, bekwazi ngokufanelekileyo ukusombulula iingxaki zabo ngaphandle koncedo.
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka sizikhunjulwe kukuba ekuphela kwabantu esenzelwe ukubakhusela kobu bomi ngabantwana bethu, oku kubandakanya nowethu umntwana wangaphakathi. Uxanduva lwethu kumaqabane, izihlobo kunye nabanye njengabalingane bethu lubonisa kuphela izenzo zethu kubo kunye nendlela esiliphatha ngayo iqhina lethu, njengoko singenakwenzakalisa kwaye sigruzuke. Inyathelo lokuqala elivela kwimeko yeemvakalelo libonisa njengomnqweno wokukhomba amandla ethu kunye nokugxotha iingxaki zabantu abadala, abalumkileyo, abo bafanele ukuba namandla ngakumbi kwaye balungele ukujongana nemiba yabo, kwaye oku kususa eyona ngundoqo yamandla esinawo. kufuneka sisebenzise ukuphila ubomi bethu kwaye sakhe ikamva lethu, nabantwana bethu.
Gcina amandla kwaye uwasebenzisele wena kuqala, nokuba unobunzima ekubonakaliseni imibono ekuphefumlele ukuba uqale ngayo. Zikhumbuze ukuba kufuneka uyikhusele intliziyo yakho ngelixa uyivumela ukuba ikhale, yophe, kwaye ikhale ukuba ifuna njalo, de ube ukwazi ukuluqonda ubizo lwayo. Lixesha lokuba wenze ngokweminqweno yomntwana wakho wangaphakathi endaweni yokumbekela imiqathango kanye njengoko ookhokho bakho benzayo. Yenza olu tshintsho kwaye wenze inyathelo uMphefumlo wakho onqwenela ukulenza, ke ukunqongophala kolawulo akusayi kuphinda kuveze umba kodwa ibe luhambo lwakho olukhulu. Ukuba eli lixesha lokuyeka, khawucinge ukuba kungakanani okunokwenziwa ngaphandle kwezinyanzeliso zokuziphatha ezinyulu ukuba uvumela nje umsindo, usizi, ingqumbo kunye nentiyo ukuba yamkelwe, yamkelwe, ukuze baphume kwaye baguqule into eyondlayo. iSelf eyakhiweyo neyilayo.
Khetha Uphawu Umhlaza Aquarius Iponti Leo